रीता र प्रभात को चिकामारी - Desi Sexy Stories MenuHomeForumSubmit Your Stories
MenuHomeIncestBro Sis Incest StoriesDad Daughter Incest StoriesFamily Group Incest StoriesGay, Lesbian Incest StoriesIncest Pregnant StoriesMom Son Incest StoriesOther Relations Incest StoriesCelebrity NudeRapeHumilation sex storiesNudes PhotosDesi Bhabi NudeDesi Nude PhotosNude photosEnglishDesiOfficeTeacher Ke Saath Sex StoriesCelebritywifeCouple Sex StoriesGirlfriend sex storiesHindi sex storiesMaid Servant sex storiesNaukar/Naukrani sex storiesSchool College Sex StoriesGroupExtreme Photos	Home » Nepali Sex Stories » रीता र प्रभात को चिकामारी
बोल न रीता, के भयो – किन चुप लागेकी -‘- प्रभात बोल्छ। ‘के कुरा गर्ने भन्नु न, तपाईं नै मेरो छेउमा हुनुहुन्छ, तपाईं भएपछि मलाई सबै पुगिसरी हुन्छ’- रीताले भोनिन्। ‘तिमी कति प्यारी छौ है, मलाई कति माया गर्र्छौ तिमी -‘- ओठमा चुम्बन गरी आफ्नो हातले रीतालाई सुस्तरी अङ्गाल्दै प्रभातले भन्यो। ‘तपाईं पनि त मलाई माया गर्नुहुन्छ नि। मलाई तपाईं जति प्यारो यो दुनियाँमा कोही लाग्दैन’- रीताले पनि प्रभातको चुम्बनको प्रत्युत्तर फर्काइन्।अब प्रभात रीताको अझ नजिक टाँसिएर सुत्छ। आफ्नो हात रीताको वक्षमा लगेर स्थिर गर्छ। विस्तारै त्यहाँ चल्मलाउन थाल्छ। ऊ अब रीताको मुखभित्र आफ्नो मुखले के-के खोज्न थाल्छ। रीताको शरीरको न्यानो स्पर्शले प्रभातलाई उत्तेजित बनाउँदै लग्यो। दिउँसो लगाएको लुगामा सुतेकी रीताको टिसर्ट विस्तारै प्रभातले माथितिर सार्न थाल्छ। टिसर्ट माथि सारिसकेपछि ऊ आफ्नो हात ब्राको हुकमा लगेर चलमलाउन थाल्छ। रीता ठूलो श्वास फेर्दै हुन्छे। ब्राको हुक खोल्न अप्ठ्यारो भएपछि रीताले प्रभातलाई सघाउँछिन्। प्रभात आफ्नो कार्यमा सफल हुन्छ। अब ऊ आफ्ना हातहरू रीताको पुष्ट वक्षमा ल्याएर स्थिर गर्छ। एउटा सानो बच्चाले गुडियासँग खेलेझैँ प्रभात रीताका स्तनसँग खेल्न थाल्छ। उत्तेजनाले बेला-बेला रीता प्रभातको ओठ चुस्छिन्। त्यस्तै प्रभात पनि उसको ओठ चुस्न थाल्छ। प्रभात हातको औँलाले रीताको नाइटोको गहिराइ नाप्छ। जुन रीताको पेन्टको टाँकमा चल्मलाउँछ। तुरुन्तै आफ्नो इच्छामा सफलता पाएपछि रीताको पेन्ट तल सार्न थाल्छ। सो कार्य गर्दा प्रभातलाई रीताले सहयोग गर्छिन्। रीता पेन्ट फालेर प्रभातसँग लपक्क टाँसिन्छिन्। प्रभातले आफ्नो चोर औँला रीताको योनीमा पसाउँछ। यसबेला प्रभातको हातले रीताको योनीबाट तरल पदार्थ निस्किरहेको अनुभूति गर्छ। ऊ रीताको योनी खेलाउँछ। कुनै परस्त्रीको प्रथम पटक सामीप्यता पाएको प्रभात रीताको हरेक अङ्गहरूलाई चाख लिई लिई निरीक्षण गरिरहन्छ। रीता बेला-बेलामा उत्तेजनाले प्रभातको ओठ टोक्दै हुन्छिन्। यसबेला प्रभातको काम नायक चाखका साथ रीताको महत्वपूर्ण अति गोप्य त्यही अङ्गसँग जोडिएको हुन्छ। रीता पनि उत्तेजित हुन्छिन्। केही बेर नबोलीकन प्रभातले काम सुरु गर्ला भनेर आशा गर्छिन्। तर प्रभातचाहिँ हातले खेल्नमै व्यस्त भएपछि उनी बोल्छिन्- ‘के गरिराख्नुभएको राजा, छिटो न आफ्नो काम गर्नुस्, कति मलाई तड्पाइरहनुहुन्छ -‘
‘मेरी प्यारी रानी, म तिमी तड्पेको सुन्न सक्दिन, त्यसैले अब आफ्नो काम सुरु गर्छु प्रभातले कुरा स्वीकार्छ। रीताको हात समातेर आफ्नो लिङ्गमा ल्याउँछ। आगोबाट हात झिकेझैँ गरी रीता फुत्त हात झिक्छे। प्रभात रीतामाथि उक्लन्छ। रीता प्रभातलाई सजिलो पारिदिन्छे। प्रभातले फटाफट आफ्नो काम सुरु गर्छ। लिङ्ग प्रवेश हुनासाथ प्रभातलाई खूब आनन्द आउँछ। रीता भने पीडाले चिच्याउन थाल्छिन्- नाइँ-नाइँ, मैले सकिन छिटो बाहिर निकाल्नुस्…। प्रभातललाई रीताको पीडा सैह्य हुँदैन, त्यसैले प्रभातले आफ्नो कामनायक बाहिर निकाल्छ। ‘के भयो तिमीलाई – किन डराएकी, भन त -‘ प्रभातले रीताको गाला मुसार्दै सोध्यो। ‘तपाईंलाई त मज्जा भयो होला नि, अर्कालाई के भइराखेको छ, ख्याल गर्नु छैन -‘ लाडे बोली बनाएर रीताले भनी।भन न त मैले के गर्नुपर्छ – म तिमीलाई पीडा भएको सहन सक्दिन क्या !’ प्रभात बोल्छ। ‘कस्तो साह्रो गरी कुहिनाले थिचेको – यत्रो ठूलो शरीर थामेकी छु। त्यहीमाथि कुहिनाले थिच्दा अर्कालाई दुख्दैन -‘- रीताले प्रभातलाई वास्तविकता बताउँछिन्। प्रभात त्यो गल्ती दोहोर्याउँदैन। बडो सतर्कका साथ पहिले झैँ गरी प्रभातले आफ्नो काम सुरु गर्छ। आफ्नो नायकलाई लक्ष्यमा पुर्याइसकेपछि प्रभात तल-माथि गर्दै मच्चिन थाल्छ। हातले उनको सुकोमल स्तन मुसारिरहेको हुन्छ। त्यस्तै चुम्बन पनि गरिरहेको हुन्छ। दुवै आनन्दले सुत्छन् र निदाउँछन्। राति जब रीता ब्युँझिन्छिन्, उनलाई थाहा हुन्छ आफ्नो योनीक्षेत्रमा केही सल्बलाइरहेको छ, जसको उनलाई हल्का आनन्द पनि आइरहेको छ। उनी हात लम्काएर बेड स्वीच अन गर्छिन्। उज्यालोमा देख्छिन् त प्रभात उनका दुवै तिघ्रा फारेर बीचमा बसेर उनको गुप्तक्षेत्रमा जीब्रो पो चलाइरहेको ! बत्ती बलेपछि प्रभात रीतालाई हेरेर थोरै हाँस्छ। रीता पनि मुस्कुराउँछे। प्रभात पुनः आफ्नो कार्य सुरु गर्छ। ऊ योनीको डिलमा आफ्नो जिब्रो चलाउँछ। रीताको बच्चाको जस्तो कलिलो योनीमा जिब्रो चलाउन उसलाई खूब मजा आउँछ। रीता पनि आनन्दले प्रभातको टाउको सुम्सुम्याउँछिन्। केही समयपश्चात् प्रभात रीताका स्तन प्रेमपूर्वक मुसार्दै आफ्नो जिब्रो लिङ्गझैँ योनीमा भित्र-बाहिर गराउँछ। रीता भुतुक्कै भएर सुस्केरा काड्छिन्। उनी भन्छिन्- ‘प्रभात, लौन, मलाई त खपिनसक्नु भयो, अब केही गर्नुस्।रीताले यसो भन्नासाथ प्रभात फेरि रीतामाथि चढ्छ। उसले यसो गर्दा रीताको आँखाअगाडि प्रभातको विशाल लिङ्ग देखापर्छ भने प्रभातचाहिँ रीताको योनीतिर आँखा पुर्याउँछ। रीता प्रभातको लिङ्ग हातमा लिन्छिन् र प्रेमपूर्वक मुसार्दै चुस्न थाल्छिन्। उता, प्रभात दुवै हातले रीताको योनीमा चलाउन थाल्छ। यो क्रियाले दुवैलाई चरम आनन्द प्राप्त हुन्छ। केही समयपछि दुवै स्खलनको अवस्थामा पुग्छन्। प्रभात बोल्छ- ‘रीता केही छिन रोक त।’ ‘किन राजा -‘ प्रभातको विशाल लिङ्ग मुखबाट निकाल्नै रीता बोल्छिन्। ‘म बग्न लागेँ, त्यसैले के।’ प्रभातले जवाफ दिन्छ। ‘मलाई पनि त्यस्तै भइरहेछ। यही मौकामा काम सिध्याउ न हुँदैन -‘ प्रभात- ‘यति छिट्टै किन -‘ रीता- ‘जागेपछि फेरि गर्ने नि, के आपत छ र ! हामी दुई छँदै छौँ क्यारे।’‘त्यसो भए गरेर नै सिध्याउने त -‘ यसो भन्दै प्रभात फर्किन्छ र रीताको योनीमार्गमा आफ्नो विशाल लिङ्ग लगेर राख्छ। विस्तारै दबाब दिन्छ। लिङ्ग योनीमा पस्छ। रीताका स्तन सुम्सुम्याउँछ। विस्तारै प्रहार गर्न थाल्छ। यसरी लयात्मक तरिकाले प्रहार गरेको रीतालाई खुब रमाइलो लाग्छ। प्रभात जोडले प्रहार गर्न थाल्छ। रीता उसलाई उत्साहित गर्दै बोल्छिन्- ‘हो, अझ जोडले प्रहार गर्नु, हो-हो, यसरी नै।’ रीता यसो भन्दै प्रभातलाई हौस्याउँछिन्। दुवै उत्तेजनाले कराउँछन्। र, केही थप घात-प्रतिघातपछि दुवै शिथिल हुन्छन्। त्यसपछि यी दुई प्रेमी जोडी आनन्दपूर्वक टाँसिएर सुत्छन् र निदाउँछन्। Tweet
साली संग	Nepali Sex Story मेरो पहिलो सेक्स अनुभव	अनिताको चाकमा पनि चिकियो	About The Author